WAR CUSUB: Xiddiga Reer Brazil Ee Oscar Oo Ka Tanaasulaya Dhalashada Waddankiisa Iyo Dalka Uu Muwaadinka U Noqonayo – Laacibnet.net
WAR CUSUB: Xiddiga Reer Brazil Ee Oscar Oo Ka Tanaasulaya Dhalashada Waddankiisa Iyo Dalka Uu Muwaadinka U Noqonayo
July 28, 2020 Abdiwahab Ahmed
Xiddiga khadka dhexe ee reer Brazil ee Oscar ayaa doonaya inuu beddelo jinsiyaddiisa oo uu ka tanaasulo waddankiisa, isla markaana uu qaato dhalashada waddan kale.
“Dabcan, waxaan ka fikiri karayaa inaan beddelo dhalashadayda, sababtoo ah way adag tahay inaan tago xulka qaranka Brazil waqtigan, laakiin China qof walba wuu arki karayaa sida aad u wanaagsan tahay.” Ayuu yidhi Oscar oo u warramay wargeyska Sportscene.
Oscar waxa uu caddeeyey in boos uga bannaan yahay xulka qaranka China, waxaanu yidhi: “Xulka qaranka China, wuxuu u baahan yahay hal ciyaartoy oo khadka dhexe ah, sidaa darteed, waxaan ka fikiri karayaa inaan caawiyo.
“Waan jecelahay China, laakiin ciyaartoydu hadda way beddeli karayaan dhalashadooda si ay u tagaan China, wax wanaagsanna way qaban karayaan.”
Qoraalka dhowr meelood oo afsoomaali ahaan sixid u baahan baa ku jira, waana idin la sixi karaa haddii aad diyaar u tihiin.
REER BRAZIL WALIGOOD GAAJO KA CARAR AHAAYEEN REER REAL MOOYEE__🤣